अक्सिजन अभावमा पोखराका व्यवसायी गुभाजुको निधन : RajdhaniDaily.com
Home प्रदेश प्रदेश ४ अक्सिजन अभावमा पोखराका व्यवसायी गुभाजुको निधन
पोखरा । पोखराका सफल व्यवसायी कृष्णमान गुभाजुको ६२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण उनको ज्यान गएको हो ।
पोखराबाट हेलिकोप्टरमार्फत थप उपचारार्थ काठमाडौं लगिएकोमा उनको भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटलमा गएराति निधन भएको हो । उनलाई वैशाख १५ मा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
काठमाडौंका कुनै हस्पिटलमा पनि बेड नपाएपछि भक्तपुर लगिएको भक्तपुर इन्टरनेशनल हस्पिटल लगिएको परिवारजनले जनाएको छ । अक्सिजन अभावमा उनको ज्यान गएको बताइएको छ ।
उनी उच्च रक्तचापबाट समेत पीडित थिए । पोखराको मोहोरिया निवासी कृष्णमानले कृषकञ्चन ज्वेलरी चलाउँदै आएका थिए । साथै कञ्चन क्यापिटल पनि उनैको कम्पनी हो ।
विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक संघसंस्थामा आबद्ध उनी सुनचाँदी व्यवसायी संघ पोखराका पूर्व अध्यक्ष थिए । पोखरा–११, काहुँडाँडामा निर्माणाधीन धर्मकाय बुद्ध मण्डला समितिमा उनी कोषाध्यक्ष थिए ।
रोटरी क्लब अफ अन्नपूर्णका पूर्व अध्यक्ष उनी विश्व शान्ति स्तूपा संचालन समितिमा २ कार्यकाल सचिव भइ काम गरेका थिए । धर्मशीला बुद्ध विहार नदीपुरको ज्ञानमाला संघ र दायक सभाका पूर्व अध्यक्ष उनी युवा बौद्ध संघ र धर्मोदय सभाका सल्लाहकार थिए । स्व. कृष्णमानका श्रीमती, २ छोरा र १ छोरी छन् ।
तीन महिनादेखि सचिव बैठक अवरुद्ध
काठमाडौं । सरकारका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन तथा कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन नियमित रूपमा बस्नुपर्ने सचिव बैठक तीन महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै...
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - November 27, 2020 0
९१ वर्षिया उपप्रमुख कार्कीले कोरोना जितिन्
प्रदेश तुलसी भण्डारी - May 20, 2021 0
वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कार्कीले कोरोनालाई जितेर डिष्चार्ज भएकी छन् । उनले ९१ बर्षको उमेरमा कोरोना जितेकी हुन् । नियमित योग, ध्यान र...
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - January 8, 2021 0
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - June 26, 2020 0
नेपालमा नयाँ प्रजातिको कोरोनाको आंशका !
Breaking News राजधानी समाचारदाता - February 15, 2021 0
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रजाति पहिचानका लागि ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ गर्ने तयारी थालिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक...